စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ | Mytrickstips
ပင်မစာမျက်နှာ // စည်းမျဉ်းများ
ဝန်ဆောင်မှုစည်းကမ်းချက်များ - TOS
ဂရုတစိုက်ကြှနျုပျတို့၏ website ကို အသုံးပြု. ရှေ့တော်၌ထို '' န်ဆောင်မှု၏စည်းမျဉ်းများ '' ကိုဖတ်ပါ။ ကြှနျုပျတို့၏ website အားဝင်ရောက်သို့မဟုတ်အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်, သင်ကျွန်တော်တို့ကိုသငျသညျခွငျးအားဖွငျ့ကြှနျုပျတို့၏ site မှတင်သွင်းသတင်းအချက်အလက်များမျှဝေအသုံးပြုရန်သင်၏ခွင့်ပြုချက်ပေးပါ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှု၏စည်းကမ်းချက်များနှုန်းအဖြစ်, သင် '' သဘောတူ ' နဲ့ 'လက်ခံ ' တစုံတမျိုး၌အကြှနျုပျတို့၏ website ကို အသုံးပြု. ဤဝေါဟာရများဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ website ကို Third-party က်ဘ်ဆိုက်များမှအတော်ကြာလင့်များနိုင်ပါသည်။ ကျနော်တို့ကိုတိုက်ရိုက်ဤဝက်ဘ်ဆိုက်များမဆိုနှင့်အတူဆက်နွယ်ကြသည်မဟုတ်။ ထို့အပွငျအပေါငျးတို့သပစ္စည်းများနှင့်ဆက်စပ်အမှတ်တံဆိပ်များမှာ မ ကျွန်တော်တို့ကိုကပိုင်ဆိုင်ခြင်းနှင့်ထိန်းချုပ်။ အဆိုပါအသိပညာဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများ၏ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှုသက်ဆိုင်ရာပိုင်ရှင်များနှင့်အတူဖြစ်ကြသည်။ ကျနော်တို့သူတို့နှင့်အတူကွန်နက်ရှင်မရှိတာဝန်များကိုယူဆ။
ကြှနျုပျတို့၏ website ၏အဘယ်သူမျှမစိတျအပိုငျးအကြံပြုချက်များသို့မဟုတ်အာမခံမဆိုမျိုးကိုပူဇော်ခြင်းငှါရည်ရွယ်ပါသည်။ ကျနော်တို့မဆိုရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ site သွားရောက်လည်ပတ်သို့မဟုတ်သုံးပြီး၏ရလဒ်အဖြစ်သင်သို့မဟုတ်သင့်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းထိခိုက်ပျက်စီးမှုမဆိုကြင်နာတာဝန်ရှိသည်ဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ ကျနော်တို့အဘယ်သူမျှမအာမခံချက်သမျှထုတ်ဖော်ပြောဆိုသို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ site ပေါ်တွင်များကိုသတင်းအချက်အလက်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများအဘို့အဓိပ်ပာပါစေ။
ကျနော်တို့မဆိုကြိုတင်အသိပေးစာပေးခြင်းမရှိဘဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ website တွင်ပါဝင်သောအကြောင်းအရာအတွက်မဆိုတိဖြေရှင်းပေးရန်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ကျနော်တို့အမြဲတမ်းအမှားများကိုချက်ချင်း fixed မည်ဖြစ်ကြောင်းအာမမခံနိုင်ပါဘူး။ ထို့ပြင်ကျွန်ုပ်တို့က်ဘ်ဆိုက်အားလုံးအချိန်များတွင်ရရှိနိုင်လိမ့်မည်ဟုကတိပေးကြပါဘူး။ ကျွန်ုပ်တို့၏ site ပေါ်တွင်သတင်းအချက်အလက်စည်းကမ်း-စာအုပ်မဟုတ်ပါဘူးနှင့်တစ်ဦး, ဥပဒေရေးရာငွေရေးကြေးရေး, သို့မဟုတ်ဆေးဝါးအကူအညီအဖြစ်ကြည့်ရှုမရသင့်ပါတယ်။ အဆိုပါထုတ်ဝေအကြောင်းအရာပရော်ဖက်ရှင်နယ်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးအတှကျသာမဟုတျဘဲတစ်ဦးအစားထိုးသတင်းအချက်အလက်ရည်ရွယ်ချက်အဘို့ဖြစ်၏။
သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်အန္တရာယ်မှာကြှနျုပျတို့၏ website ကို အသုံးပြု. ရသည်။ ကျနော်တို့ထဲကသို့မဟုတ်မည်သည့်ပုံစံသို့မဟုတ်ထုံးစံ၌ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုများသို့မဟုတ်က်ဘ်ဆိုက်၏အသုံးပြုမှုနှင့် ဆက်စပ်. ပေါ်ထွန်းအံ့သောငှါမဆိုအကျိုးဆက်များအတွက်တာဝန်ရှိသည်မဟုတ်ပါ။ လာသောကျွန်ုပ်တို့၏ site ဖော်ပြအလားအလာဆုံးရှုံးမှုအကြံပြုထားသည်လျှင်ပင် 100% ဟာမင်းအတွက်ပါပဲ။ သငျသညျသဘောတူ မ ကတိုက်ရိုက်သွယ်ဝိုက်ဖြစ်စေ, လက်ငင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုရဲ့ရှိမရှိ, ဆုံးရှုံးမှု, ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု, ဒါမှမဟုတ်မည်သည့်အခြေအနေအရ liabilities မဆိုကြင်နာသည်ကျွန်တော်တို့ကိုတာဝန်ခံကိုင်ရန်။
တိုင်းကြိုးစားအားထုတ်မှုကျွန်တော်တို့ရဲ့ website တွင်သတင်းအချက်အလက်မှန်ကန်ကြောင်းသေချာစေရန်ခေါ်ဆောင်သွားတာဖြစ်ပါတယ်နေချိန်မှာကျနော်တို့က၎င်း၏တိကျမှန်ကန်မှုသို့မဟုတ်ပြည့်စုံခိုင်လုံပါဘူး။ ဒီ website ကိုအလိုတော်၏မသက်ဆိုင်ကြောင်းရှင်းလင်းချက်ထဲမှာဘယ်အရာကမှ, (က) သင်၏သို့မဟုတ်ကြောင့်ပေါ့ဆမှုမှပေါ်ထွက်လာသောပုဂ္ဂိုလ်ရေးဒဏ်ရာသို့မဟုတ်သေခြင်းတရားဘို့ငါတို့တာဝန်ယူမှုကိုကန့်သတ်ရန်သို့မဟုတ်ဖယ်ထုတ်။ (ခ) ကန့်သတ်သို့မဟုတ်သင်၏သို့မဟုတ်မည်သည့်သဘာဝတရား၏လိမ်လည်မှုဘို့ငါတို့တာဝန်ယူမှုကိုဖယ်ထုတ်။ (ဂ) ပညတ်တရားအားဖြင့်အခွင့်မရှိကြရဲ့ဘာမှဆန့်ကျင်သင်၏သို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တာဝန်ယူမှုကိုကန့်သတ်ရန်သို့မဟုတ်ဖယ်ထုတ်။ (ဃ) ကန့်သတ်သို့မဟုတ်သင့်ပါသို့မဟုတ်သက်ဆိုင်သောဥပဒေအရဖယ်ထုတ်လိမ့်မပြုစေခြင်းငှါကျွန်တော်တို့ရဲ့တာဝန်ယူမှုကိုဖယ်ထုတ်။
ကျနော်တို့သာအင်္ဂလိပ်ဝန်ဆောင်မှုကျွန်တော်တို့ရဲ့အသုံးအနှုန်းများသည်။ ကြှနျုပျတို့၏ website ကို အသုံးပြု. ဖြင့်, သင်သည်သဘောတူ ဝန်ဆောင်မှု၏စည်းမျဉ်းများ ငါတို့အားဖြင့်ထွက် set ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ပါတယ်။ သငျသညျသဘောမတူဘူးဆိုရငျ, သငျသညျကြှနျုပျတို့၏ website ကိုအသုံးပြုရန်မဟုတ်အကြံပြုပါသည်။ အဘယ်သူမျှမအခြေအနေမျိုးမှာသင်ငါတို့အားဖြင့်ဖော်ပြထားဝန်ဆောင်မှုအားလုံးစည်းကမ်းချက်များဖို့သဘောမတူဘူးလျှင်ကျွန်ုပ်တို့၏ site သုံးစွဲဖို့ဆက်လက်သငျ့သညျ။
လွတ်လပ်သောနှင့်ကန့်သတ်တာဝန်ယူမှု entity အဖြစ်ကျနော်တို့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေး liabilities ကန့်သတ်ရန်တိုင်းပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ဒါကြောင့်, သငျသညျကြှနျုပျတို့၏ website ကိုအသုံးပြုဖို့ကိုဘယ်လိုအောက်မေ့စေသတည်း။ အသုံးပြုမှု၏အခွအေနေသကဲ့သို့, သင်တို့၏ website ၏အသုံးပြုမှုနှင့် ဆက်စပ်. ခံရစေခြင်းငှါ, မဆိုတာဝန်ယူမှုသို့မဟုတ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအတွက်ကြှနျုပျတို့၏ website သို့မဟုတ်ကျနော်တို့ရဲ့ဝန်ထမ်းများဆန့်ကျင်မည်သည့်တောင်းဆိုမှုများကိုငါမရောက်စေကြောင်းလက်ခံပါ။ တူညီသောလိုင်းများတလျှောက်တွင်, သင်၏ဝန်ဆောင်မှုစည်းကမ်းချက်များကိုကြှနျုပျတို့၏ website ရဲ့မသက်ဆိုင်ကြောင်းရှင်းလင်းချက်ကျွန်တော်တို့ကိုဆန့်ကျင်တင်သွင်းမဆိုတောင်းဆိုမှုများဆန့်ကျင်ကျွန်တော်တို့ကိုနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ထမ်းများကာကွယ်ပေးလိမ့်မည်ဟုလက်ခံရန်သင့်လက်၌အလုံအလောက်အသိပညာကြောင်းသဘောတူသည်။
ဝက်ဘ်ဆိုက်ရဲ့မသက်ဆိုင်ကြောင်းရှင်းလင်းချက်မဆိုအစိတ်အပိုင်းသက်ဆိုင်သောဥပဒေနှင့်ထပ်တူပြုခြင်း၌မဖြစ်တယ်ဆိုရင်, ဒီစာမျက်နှာမှာဖော်ပြထားဝန်ဆောင်မှု၏အခြားအသုံးအနှုန်းများ၏ဘက်တော်သားကိုထိခိုက်မည်မဟုတ်။ ထို့အပွငျ, ငါတို့မဆိုလမ်းအတွက်ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူဆက်စပ်မဆို Third-party က်ဘ်ဆိုက်များကနေရရှိလာတဲ့အားလုံး liabilities Disclaimer ။ ကျနော်တို့ဧည့်သည်များအခမဲ့ codes တွေကိုပေးမယ့်အလယ်တန်းလူအဖြစ်အလုပ်လုပ်ကြသည်။ ကျနော်တို့ကိုတိုက်ရိုက်ဆက်နွယ်သို့မဟုတ် Third-party site များ၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများမဆိုနှင့်ဆက်စပ်ကြသည်မဟုတ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အခမဲ့ဝန်ဆောင်မှုများကို / သတင်းအချက်အလက်မဆိုအာမခံသို့မဟုတ်ကပူးတွဲညှို့ခြင်းမရှိဘဲ "IS AS" ထောက်ပံ့ပေးသည်။ ဒါကြောင့်ငါတို့ကပေးတဲ့အဖြေအားလုံးအချိန်ကိုအလုပ်လုပ်မည်ကိုအာမမခံနိုင်ပါဘူး။ ငါတို့သည်သင်တို့အခမဲ့ဆုကြေးဇူးကို codes တွေကိုပေးဖို့ရည်ရွယ်ထားပေမယ့်ကျနော်တို့က code ကိုကပ်ကာလ၏ 100% အလုပ်လုပ်လိမ့်မည်ဟုကတိပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ ဒါ့အပြင်သငျသညျအမြားဆုံးကိစ္စများတွင်စစ်တမ်းတစ်ခုဖြည့်စွက်ရန်သင့်အားလိုအပ်မယ်သောကုဒ်, သော့ဖွင့်ဖို့လိုအပ်သောခြေလှမ်းများဖြည့်စွက်ရန်သဘောတူရမည်ဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့စွမ်းရည်ကိုအကောင်းဆုံးလုပ်ဖို့, ငါတို့ "မကုန်ကျ" စစ်တမ်းများပူဇော်ဖို့ကြိုးစားပေမယ့်တိုင်းပြည်-တိကျတဲ့ပါပဲ။ ဒီတော့စစ်တမ်းနှင့်ပတ်သက်သောမည်သည့်ကုန်ကျစရိတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်အောက်တွင်ကျကြပါဘူး။
ကျနော်တို့ကြိုတင်သတိပေးခြင်းမရှိပဲအချိန်မရွေး "ဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာစည်းကမ်းချက်များ" ကိုအပြောင်းအလဲများဖြစ်စေခြင်းငှါအခွင့်အာဏာရှိသည်။ ဒါဟာလက်ရှိအပြောင်းအလဲများနှင့်အတူတက်ထားရန်အသုံးပြုသူရဲ့တာဝန်ပါပဲ။ အသုံးပြုသူကိုဤတူညီသောစာမျက်နှာပေါ်တွင်ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသောစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များကိုရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျကြှနျုပျတို့၏ website ပေါ်မှာဝန်ဆောင်မှု၏စည်းကမ်းချက်များနှင့် ပတ်သက်. တစ်စုံတစ်ရာထပ်မံမေးခွန်းများကို, ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်အခမဲ့ခံစားရှိပါက။